Ikhaya elihle eKaluderovac elinamagumbi okulala ayi-1
Eli khaya limnandi leholide likwilali encinci kwingingqi yeLika. Kwipropathi yendalo unokufumana isiqwenga kwaye ube kude kwingxolo yesixeko kunye nesihlwele, ngenxa yoko kunokwenzeka umqondiso weselula obuthathaka. Apha unokonwabela umbono omangalisayo wezinto zendalo zeLika kunye neencopho zeentaba, apho indawo esembindini ithatha induli ekufuphi iMletača, ethi ngokumila kwayo ikhumbuze iphiramidi. Indawo ethile yepropathi, kumda phakathi kwamasimi kunye nehlathi kuya kukunika umbono ophefumulayo kwintaba iVelebit, kwaye ebusuku unokunandipha isibhakabhaka esihle seenkwenkwezi. Eli khaya lilula kodwa elisebenzayo leholide libandakanya igumbi lokuhlala elinekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, igumbi lokulala kunye negumbi lokuhlambela, ngelixa ubuncinci bokuphakama kwesilingi yi-100cm. Iindwendwe zineebhayisekile ezimbini kunye nendawo apho zinokulungisa izosa. Kufuphi kukho iintaba ezininzi kunye neendlela zokuhamba, eziya kuthi zithande abalandeli bezemidlalo. Ngexesha lokuhamba unokufunda izityalo zonyango, amajikijolo, amakhowa, okanye ujabulele ingoma yeentaka kunye neqakamba, kwakhona unokudibana apha umvundla, impungutye okanye i-roe deer. Ungaphuthelwa ukutyelela umlambo i-Lika, ofanelekileyo ukuloba kunye ne-kayaking. Indlela engalungiswanga ikhokelela kwikhaya leholide.
Imigama: indawo yokuhlala ekufutshane 500 m / ivenkile 5 km / Amanye amanzi okanye indawo yokuqubha.(Ichibi) 4 km / indawo yokutyela 9 km / idolophu ekufutshane(iPersic) 9 km / amanzi(Umlambo) 700 m